Hollywood Bollywood | Gufgaf : Nepal ko entertainment web site : Nepali cinema & Gossip : Nepali comedy : Video & jokes : celebrity interview : Nepali art ,music , manoranjan & more - Part 3
एजेन्सी कार्तिक १४ ✎ निर्माता विपुल शाह सन् २००८ को सिनेमा ‘सिंह ईज किङ’को सिक्वेल बनाउँदैछन् । यस सिनेमाको सिक्वेलको नाम ‘शेर ईज किङ’ हुने भएको छ । किनभने निर्देशक अनि..
नवाजको पहिलो प्रेमबारे प्रेमिकाको यस्तो खुलासा
एजेन्सी कार्तिक १३ ✎ सधै सिनेमा र अभिनयका कारण चर्चामा आउने बलिवुड अभिनेता नवाजुद्दिन सिद्धिकी यतिबेला आफ्नो किताब ‘एन अर्डिनरी लाईफ–अ ममोर‘का कारण चर्चामा आएका छन् । न..
जान्नुहोस् भारतको सबभन्दा महंगो सिनेमा ‘२.०’ बारे
एजेन्सी कार्तिक १२ ✎ दुबईको बुर्ज पार्कमा भारतको पहिलो र एशियाको दोस्रो महंगो सिनेमा ‘२.०’ को म्यूजिक सार्वजनिक गरिएको छ । यो कार्यक्रममा मात्रै निर्माताले १५ करोड भारत..
अजयको सिने करिअरमा सबभन्दा धेरै कमाउने सिनेमा बन्यो ‘गोलमाल अगेन’
एजेन्सी कार्तिक १२ ✎ रोहित शेट्टीको निर्देशन रहेको सिनेमा ‘गोलमाल अगेन’ २०१७ मा सबैभन्दा धेरै कारोबार गर्ने बलिवुड सिनेमाको सूचिमा परेको छ । ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्शका ..
‘२.०’ अडियो सार्वजनिकमै १५ करोड खर्च, पन्छिए करण– बलिवुड अपडेट
एजेन्सी कार्तिक १० ✎ २७ अक्टोबरमा दुबईको बुर्ज पार्कमा सिनेमा ‘२.०’ को अडियो सार्वजनिक हुँदैछ । सिनेमाको अडियो सार्वजनिक गर्नुअघि निर्माताहरुले यस सिनेमाको पोस्टर सार्व..
‘२.०’ रिलिज अगाडि नै २ सय करोड !
Gufgaf ✎ सिनेमामा कलाकारहरुको लुक्स र महंगो बजेटमा बनेका कारण चर्चामा रहेको सिनेमा ‘२.०’ फेरि स्याटलाईट अधिकारका कारण चर्चामा आएको छ । खासमा रजनीकान्त र अक्षय कुमारको ..
फोटोका कारण ट्रोल र विवादमा ट्विंकल, हेर्नुस् विवादमा परेको तस्बिर ?
Gufgaf ✎ अभिनेता अक्षय कुमारकी पत्नी अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना विवाहसँगै अभिनयबाट टाढिईन् । अभिनयबाट टाढिएपछि उनी यतिबेला लेखनमा सक्रिय छिन् । उनले केही किताब पनि प्रकाशित गरिसकेकी छिन् । ट्विंकलले लेखेका किताबलाई धेरैले प्रशंसा गरेका छन् । तर हालै मात्र किताबसँग पोज दिएको एक तस्बिरका कारण ट्विंकल ट्रोल हुन पुगेकी छन् ।
दीपिकाका कारण चर्चित छिन् यी अभिनेत्री
Gufgaf ✎ दक्षिण भारतीय सिने उद्योगकी चर्चित अभिनेत्री अमाला पल २६ अक्टोबर देखि २७ वर्षमा प्रवेश गरेकी छिन् । २६ अक्टोबर सन् १९९१ अक्टोबर २६ मा जन्मेकी अमालाले सन् २००९ मा सिनेमामा ब्रेक दिएकी थिईन् । अहिले तेलुगु, तमिल र मलयालम सिनेमाकी उत्कृष्ट अभिनेत्रीको रुपमा स्थापित भएकी अमालालाई कलेज पढ्ने समयमा सिनेमाको अफर आएको थियो ।
अनुश्का र विराट डिसेम्बरमा विवाह बन्धनमा बाँधिदै !
Gufgaf ✎ अभिनेत्री अनुश्का शर्मा र क्रिकेटर विराट कोहली एकअर्काको प्रेममा रहेको झण्डै पाँच वर्ष हुन लागेका छ । सन् २०१३ मा एउटा स्याम्पुको बिज्ञापनमा एकसाथ काम गरेदेखि यी दुई एकअर्काको नजिक आएका हुन् ।
जुन सिनेमा परिवारका सदस्यका लागि बनाइयो तर भए फ्ल्प
Gufgaf ✎ बलिवुडमा भाईभतिजावाद प्राय चर्चामा रहन्छ । बलिवुड उद्योग आफन्त हुनेहरुका लागि हो भनेर पनि भनिन्छ । बलिवुडका केही चर्चित अभिनेता, निर्माता र निर्देशकहरुलाई पटक–पटक भाई भतिजावादलाई बढावा दिएको आरोप समेत लाग्ने गरेको छ । साच्चिनै बलिवुडका केही सिनेमाहरुको निर्माण र कारोबारलाई हेर्ने हो भने यो कुरा सही पनि हो । केही सिनेमाक..
Gufgaf ✎ बलिवुडकी ड्रिम गर्ल हेमा मालिनीको बायाोग्राफी सार्वजनिक गरिएको छ । १६ अक्टोबरमा उनको ६९ औँ जन्मदिनको अवसर पारेर अभिनेत्री दीपिका पादुकोणले उनको बायोग्राफी लन्च गरेकी हुन् । ‘बियोण्ड द ड्रिम गर्ल’ नामक उनको बायोग्राफीलाई राज कमल मुखर्जीले लेखेका हुन् । हार्पर कोलिन्सले प्रकाशित गरेको यस किताबको प्रस्तावना भने भारतका प्रध..
Gufgaf ✎ यो वर्षको बहुप्रतिक्षित सिनेमा ‘पद्मावती’ छायाकंनको समय देखि नै समस्या र विवादमा छ । सिनेमाको विवाद फेरि एकपटक दोहोरिएको छ । सिनेमालाई जय राजपुतान नामक संस्थाले खुला धम्की दिएको छ । यस संस्थाले रिलिज अगाडि सिनेमा आफूलाई देखाउनु पर्ने भन्दै नदेखाएको खण्डमा रिलिज हुन नदिने धम्की दिएको हो ।
यी हुन् बिग बोस सिजन ११ का महंगा सहभागी
Gufgaf ✎ बिग बोसको घरमा विवाद, रोमान्स सबै देख्न पाईन्छ । यहाँ सहभागीता जनाउने सबै जना एकअर्कालाई कमजोर देखाउन तयार भएर आएका हुन्छन् । त्यस्तै यहाँ आईसकेपछि कुन तरिका अपनाएर चर्चा पाउने हो त्यसको पनि उनीहरुलाई ज्ञान हुन्छ । यो सब कामको लागि सहभागीहरुले मोटो रकम पाएका हुन्छन् ।
सिनेमाका लागि १ सय करोडको ड्रेस !
Gufgaf ✎ बलिवुडमा हरेक हप्ता सिनेमा रिलिज हुन्छन् । ती मध्ये केही सफल हुन्छन् त केही असफल । सिनेमा सफल–असफल जे होस् निर्माताहरुले सिनेमाको निर्माणमा भने कुनै कसर बाँकी राख्दैनन् । विशेष गरी सिनेमाका कलाकारहरुको कस्ट्युममा ध्यान दिने गरिन्छ । कुनै सिनेमामा कथाअनुसार सस्तो र सुलभ ड्रेसहरुले काम चलाईन्छ भने केही सिनेमामा महंगा ड्..
Gufgaf ✎बलिवुडका निर्माता तथा निर्देशक करण जोहर र अभिनेत्री काजोलको सम्बन्धले एकताका बलिवुडमा खुबै चर्चा बटुल्यो । करणले आफ्नो अटोबायोग्राफीमा काजोलसँग सम्बन्ध बिग्रिएको र उनको लागि आफ्नो जीवनमा अलिकती पनि ठाउँ नभएको उल्लेख गरे । करणले आफ्नो अटोबायोग्राफीमा जुन किसिमले बयान दिएका थिए त्यो सुनेका र पढेकाहरुलाई भने उनको र काजोलको..